Xildhibaan horey ugu tirsanaa Baarlamaanka Maamulka Galmudug oo la dilay
February 28, 2012 - Written by
Muqdisho:-Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug ayaa sheegaya in koox hubeysan ay ku dileen Koonfurta magaalada Gaalkacyo. Allaha u naxariistee Xildhibaankaan ayaa waxaa uu horey ugu tirsanaa Baarlamaanka Maamulka Galmudug xiligii uu madaxweyne ka ahaa Galmudug Maxamed Warsame Cali Kiimiko Marxuumka la dilay ayaa waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Maxamed Siyaad (Shulux) .
Alaha u naxariiistee Cabdullaahi Maxamed Siyaad (Shulux) ayaa xildhibaanimada ka sokow wuxuu ahaa ganacsade aad looga yaqaan gudaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug . Dilka ka dib ayaa waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan Gal-mudug .
Kooxda dilka u geysatay Marxuum Cabdullaahi Maxamed Siyaad (Shulux) ayaa goobta isaga baxsaday .Dhanka kale waxaa saaka sidoo kale lagu arkay duleedka garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo laba dhalinyaro oo meyd ah kuwaas oo ay korkooda ka muuqatay rasaas lala dhacay.
Ilaa haatan ma jiraan cid ka hadashay dilka loo geystay labada dhalinyaro oo ka tirsan Masuuliyiinta labada Maamul ee Galmudug iyo Puntland.
233,085 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress